True true: မိနျးကလေး အပြို စဈကွောငျး သကျသပွေနိုငျတဲ့ အခကျြ (၈) ခကျြ
မိနျးကလေး အပြို စဈကွောငျး သကျသပွေနိုငျတဲ့ အခကျြ (၈) ခကျြ
Definitions of virginity loss အပြိုရညျပကျြခွငျး အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုခကျြမြား “Virginity (ဗာဂငျြနတီ) အပြိုစဈ” ဆိုတာ Sexual intercourse လိငျဆကျဆံမှု တခါမှမရှိသေးတာကို ချေါတယျ။
ယောကျြားနဲ့ဖွဈဖွဈ Lesbians မိနျးကလေးခငျြး ဖွဈဖွဈ (မာစတာဘေးရှငျး) လုပျဘူးတာလား။ ဒီအမြိုး အစားတှသော ရှိတာကို “Physiological virginity ဇီဝကမ်မ-အပြိုစဈ” လို့ ချေါတယျ။
အပြိုစဈမစဈ သကျသေ ပွနိုငျမှာကတော့ အောကျပါ အခကျြမြားဖွဈပါတယျ ။
1. Breasts of virgin
အပြိုစဈတယောကျရဲ့ ရငျသားတှဟော လုံးဝနျးပွီး တငျးနမေယျ။ အလုံးတခုကို ထကျခွမျး ခွမျးထားလိုရှိတယျ။ နို့သီးထိပျဖြားကလဲ ဖှံ့ထှားမှု မပွညျ့စုံသေးဘူး။ နို့ထိပျအရောငျရငျ့ အဝိုငျး အရောငျက အသားဖွူသူတှမှော ပနျးရောငျ၊ အသားရောငျ သိပျမဖွူရငျ ညိုတိုတို၊ ဒါမှမဟုတျ အသားနကျရငျ မဲနမေယျ။
2. Labia majora
မ-အင်ျဂါနှုတျခမျးသား အကွီးဟာ ထူမယျ၊ တငျးတငျးရငျးရငျး ရှိတယျ၊ ဆနျ့နိုငျ-ကြုံ့နိုငျစှမျး ရှိမယျ။ ဘေးအနားသတျက လုံးဝနျးတယျ။ ဘယျနဲ့ညာ နှုတျခမျးသားတှကေ (ဗဂြိုငျးနား) အဝကို လုံးဝ ဖုံးထားနမေယျ။
3. Labia minora မ-အင်ျဂါနှုတျခမျးသား အသေးဟာ သေးငယျတယျ၊ ပါးလပြွီး ပြော့ပွောငျးမယျ။ ထိကိုငျရငျ အာရုံခံအသိ သိပျမြားတယျ။ အရောငျနုမယျ။ သူ့ကို မ-အင်ျဂါနှုတျခမျးသား အကွီးကဖုံးထားမယျ။ (အရောငျ ပိုရငျ့သူတှလေဲ ရှိတယျ။ လိုတာထကျ ပိုရှညျ-ပိုကွီးနသေူတှလေဲ ရှိတယျ။ “Labia မ-အင်ျဂါ နှုတျခမျးသား လှဘို့လိုသလား” ကို ဖတျနိုငျပါတယျ။)
မ-အစိဟာ သေးငယျပွီး ပနျးရောငျရှိမယျ။ သူ့ကို မ-အင်ျဂါနှုတျခမျးသား အကွီးကနေ ဖုံးအုပျနမေယျ။ (အရောငျက တသမတျတညျး မဟုတျပါ။ အရှယျအစားကလဲ သိသာသူရှိသလို သေးငယျသူလဲ ရှိတယျ။ တယောကျတညျးမှာ ဆကျဆံမှုအကွိမျ မြားရငျမြားသလို၊ အသကျရရငျရသလို ပိုကွီးလာမယျ။ ဟျောမုနျး ရောဂါ ရှိရငျ ကြားအင်ျဂါလို ဖွဈနမေယျ။)
ဗဂြိုငျးနား အပေါကျဝအကယျြဟာ ၁ဝ နှဈသမီးအရှယျမှာ လကျသနျးထိပျ လောကျသာ ဝငျလိုရမယျ။ အရှယျရောကျ အမြိုးသမီးဆိုရငျ လကျတခြောငျးစာလို့ ပွောနိုငျတယျ။ ရာသီသှေး ဆငျးတဲ့ အလုပျကိုသာ တာဝနျထမျးရဘူးသေးတယျ။
ဗဂြိုငျးနား-လှိုငျခေါငျးဟာ တငျးကွပျနမေယျ။ ကဉျြးတယျ။ မကျြနှာပွငျ ကွမျးတမျးနမေယျ။ အပေါကျဝနဲ့ သားအိမျအဝကွား အကှာအဝေးက တိုတိုလေးဘဲ ရှိမယျ။ ကွှကျသားနဲ့ အရှတျတှနေဲ့ တညျဆောကျ ထားတာမို့ ဆနျ့နိုငျ-ကြုံ့နိုငျ၊ ကဉျြးနိုငျ-ကယျြနိုငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလို တခါမှ မလုပျဘူးသေးဘဲ အရိုငျးသကျသကျ ဖွဈနမေယျ။ သှေးမဆုံးခငျအထိ အရညျရှိနလေို့ အမွဲတနျးလို စိုစှပျနတေယျ။ စိုစှပျမှု မြားနခြေိနျမှာ ထိုးသှငျးမှုကို ပိုပွီး ခံနိုငျရညျ ရှိစမေယျ။)
အပြိုမှေးဟာ အရပွေား-အနုစား ဖွဈတယျ။ ဗဂြိုငျးနားအဝကို ဖုံးနတေယျ။ ၁ မီလီမီတာ ထူတယျ။ အလညျနရောက ပိုပါးတယျ။ ပုံမှနျဆိုရငျ အပေါကျငယျငယျလေးသာ ရှိမယျ။ အပေါကျပုံစံက မတူကွ ဘူး။ ဒေါငျလိုကျ၊ အဝိုငျး၊ လခွမျးပုံ၊ အနားမညီမညာ ရှိမယျ။ ဒီပုံစံအားလုံးက ပုံမှနျဖွဈပါတယျ။ (တကယျလို့ ထိခိုကျမှု၊ ထိုးသှငျးမှု၊ ဆကျဆံမှု တခုခုရှိရငျ စုပျပွဲသှားမယျ။ စုပျပွဲမှုကလဲ ဒဏျအပျေါမှာ မူတညျတယျ။ ဒဏျပွငျးတာ၊ ထိုးသှငျးတဲ့အရာ ကွီးတာ၊ ထိုးသှငျးမှု အရှိနျ-အကွိမျတှေ အပျေါ မူတညျတယျ။ စုတျပွဲခြိနျမှာ နာမယျ။ ဒဏျတူတာဖွဈပမေဲ့ အနာခံနိုငျစှမျး မတူကွဘူး။ အတျောမြားမြား အပြိုလေးတှေ ပဌမအကွိမျ ဆကျဆံရငျ မကျြရညျကတြဲ့အထိ နာတယျ။ သှေးထှကျမယျ။ တကယျလို့ သေးတာ၊ နညျးတာနဲ့သာ ကွုံဘူးထားရာကနေ ပိုကွီးတာ၊ ပိုမြားတာနဲ့တှရေ့ငျ နဲနဲသာနာမယျ၊ နဲနာသာ သှေးထှကျမယျ၊ သှေးမထှကျ တာလဲ ဖွဈနိုငျတယျ။)
8. Fourchette commissure
မ-အင်ျဂါနှုတျခမျးသား အကွီးနှဈခု အောကျဖကျမှာ ဆုံတဲ့နရောကို ချေါတယျ။ ဒီ အရပွေား-အနုစားလေးက စုပျပွဲမသှားသေးဘဲ မိမှတေိုငျး ရှိနရေတယျ။ (ဒီအခကျြက Hymen အပြိုမှေးလို အရေးပါပမေဲ့ လူပွော သိပျမမြားဘူး။ မှေးလမျးကနေ ကလေး မမှေးဘူးသူတိုငျး တငျးတငျးရငျးရငျး ရှိနတေယျ။)
အပြိုစဈပါတယျလို့ သကျသပွေဘို့ရာ “အသုံးပွုနိုငျတယျ” လို့ ပွောတာဟာ ဒါနဲ့ မကိုကျရငျတော့ မဟုတျပါဘူးလို့ ဘယျသူက အဆုံးအဖွတျကို ပေးမှာလဲ။
မွနျမာပွညျ တရားခှငျမှာ ဆရာဝနျတှကေ (သိရ သလောကျတော့) ထှကျခကျြ မပေးရပါ။ ခငျပှနျးလောငျးက ထညျ့စဉျးစားနိုငျပမေဲ့ ကံသကေမ်မ ပွောမရလို့ ခြှငျးခကျြ ထားသငျ့တယျ။ ဒီလို အဆုံးအဖွတျမြိုးဟာ မိနျးကလေးတယောကျရဲ့ တကယျ့ ကိုယျပိုငျ ပိုငျဆိုငျမှု အစဈဖွဈတယျ။
ကံဆိုးသူတှမှော ဒီဝိသသေဟာ (မေးတဲ့သူလို) တကယျ့ပွဿနာ ဖွဈစနေိုငျတယျ။
လိငျဆကျဆံမှုဆိုတာ အစဉျအလာ လကျခံထားတဲ့ အခကျြကတော့ Vaginal penetration with penis (ဗဂြိုငျးနား) ထဲကို ကြား-လိငျအဂျါ ထိုးသှငျးနညျးနဲ့ ဆကျဆံတာကို အလိုတူဖွဈဖွဈ၊ အလိုမတူဖွဈဖွဈ အနညျးဆုံးတကွိမျ ရှိဘူးတာကို ချေါတယျ။
“Vagina-virginity (ဗဂြိုငျးနား) က (ဗားဂငျြး) ဖွဈတယျ” လို့ အတိအကခြျေါတယျ။ မေးဘို့ လိုသေးတာက ပါးစပျ သုံးနညျး တခုထဲသာ ရှိဘူးတာလား၊ စအိုနညျးတခုတညျးဆိုလဲ ထညျ့ရမှာဘဲ။
Definitions of virginity loss အပျိုရည်ပျက်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ “Virginity (ဗာဂျင်နတီ) အပျိုစစ်” ဆိုတာ Sexual intercourse လိင်ဆက်ဆံမှု တခါမှမရှိသေးတာကို ခေါ်တယ်။
ယောက်ျားနဲ့ဖြစ်ဖြစ် Lesbians မိန်းကလေးချင်း ဖြစ်ဖြစ် (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်ဘူးတာလား။ ဒီအမျိုး အစားတွေသာ ရှိတာကို “Physiological virginity ဇီဝကမ္မ-အပျိုစစ်” လို့ ခေါ်တယ်။
အပျိုစစ်မစစ် သက်သေ ပြနိုင်မှာကတော့ အောက်ပါ အချက်များဖြစ်ပါတယ် ။
အပျိုစစ်တယောက်ရဲ့ ရင်သားတွေဟာ လုံးဝန်းပြီး တင်းနေမယ်။ အလုံးတခုကို ထက်ခြမ်း ခြမ်းထားလိုရှိတယ်။ နို့သီးထိပ်ဖျားကလဲ ဖွံ့ထွားမှု မပြည့်စုံသေးဘူး။ နို့ထိပ်အရောင်ရင့် အဝိုင်း အရောင်က အသားဖြူသူတွေမှာ ပန်းရောင်၊ အသားရောင် သိပ်မဖြူရင် ညိုတိုတို၊ ဒါမှမဟုတ် အသားနက်ရင် မဲနေမယ်။
မ-အင်္ဂါနှုတ်ခမ်းသား အကြီးဟာ ထူမယ်၊ တင်းတင်းရင်းရင်း ရှိတယ်၊ ဆန့်နိုင်-ကျုံ့နိုင်စွမ်း ရှိမယ်။ ဘေးအနားသတ်က လုံးဝန်းတယ်။ ဘယ်နဲ့ညာ နှုတ်ခမ်းသားတွေက (ဗဂျိုင်းနား) အဝကို လုံးဝ ဖုံးထားနေမယ်။
3. Labia minora မ-အင်္ဂါနှုတ်ခမ်းသား အသေးဟာ သေးငယ်တယ်၊ ပါးလျပြီး ပျော့ပြောင်းမယ်။ ထိကိုင်ရင် အာရုံခံအသိ သိပ်များတယ်။ အရောင်နုမယ်။ သူ့ကို မ-အင်္ဂါနှုတ်ခမ်းသား အကြီးကဖုံးထားမယ်။ (အရောင် ပိုရင့်သူတွေလဲ ရှိတယ်။ လိုတာထက် ပိုရှည်-ပိုကြီးနေသူတွေလဲ ရှိတယ်။ “Labia မ-အင်္ဂါ နှုတ်ခမ်းသား လှဘို့လိုသလား” ကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။)
မ-အစိဟာ သေးငယ်ပြီး ပန်းရောင်ရှိမယ်။ သူ့ကို မ-အင်္ဂါနှုတ်ခမ်းသား အကြီးကနေ ဖုံးအုပ်နေမယ်။ (အရောင်က တသမတ်တည်း မဟုတ်ပါ။ အရွယ်အစားကလဲ သိသာသူရှိသလို သေးငယ်သူလဲ ရှိတယ်။ တယောက်တည်းမှာ ဆက်ဆံမှုအကြိမ် များရင်များသလို၊ အသက်ရရင်ရသလို ပိုကြီးလာမယ်။ ဟော်မုန်း ရောဂါ ရှိရင် ကျားအင်္ဂါလို ဖြစ်နေမယ်။)
ဗဂျိုင်းနား အပေါက်ဝအကျယ်ဟာ ၁ဝ နှစ်သမီးအရွယ်မှာ လက်သန်းထိပ် လောက်သာ ဝင်လိုရမယ်။ အရွယ်ရောက် အမျိုးသမီးဆိုရင် လက်တချောင်းစာလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ရာသီသွေး ဆင်းတဲ့ အလုပ်ကိုသာ တာဝန်ထမ်းရဘူးသေးတယ်။
ဗဂျိုင်းနား-လှိုင်ခေါင်းဟာ တင်းကြပ်နေမယ်။ ကျဉ်းတယ်။ မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းနေမယ်။ အပေါက်ဝနဲ့ သားအိမ်အဝကြား အကွာအဝေးက တိုတိုလေးဘဲ ရှိမယ်။ ကြွက်သားနဲ့ အရွတ်တွေနဲ့ တည်ဆောက် ထားတာမို့ ဆန့်နိုင်-ကျုံ့နိုင်၊ ကျဉ်းနိုင်-ကျယ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို တခါမှ မလုပ်ဘူးသေးဘဲ အရိုင်းသက်သက် ဖြစ်နေမယ်။ သွေးမဆုံးခင်အထိ အရည်ရှိနေလို့ အမြဲတန်းလို စိုစွပ်နေတယ်။ စိုစွပ်မှု များနေချိန်မှာ ထိုးသွင်းမှုကို ပိုပြီး ခံနိုင်ရည် ရှိစေမယ်။)
အပျိုမှေးဟာ အရေပြား-အနုစား ဖြစ်တယ်။ ဗဂျိုင်းနားအဝကို ဖုံးနေတယ်။ ၁ မီလီမီတာ ထူတယ်။ အလည်နေရာက ပိုပါးတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် အပေါက်ငယ်ငယ်လေးသာ ရှိမယ်။ အပေါက်ပုံစံက မတူကြ ဘူး။ ဒေါင်လိုက်၊ အဝိုင်း၊ လခြမ်းပုံ၊ အနားမညီမညာ ရှိမယ်။ ဒီပုံစံအားလုံးက ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ (တကယ်လို့ ထိခိုက်မှု၊ ထိုးသွင်းမှု၊ ဆက်ဆံမှု တခုခုရှိရင် စုပ်ပြဲသွားမယ်။ စုပ်ပြဲမှုကလဲ ဒဏ်အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ ဒဏ်ပြင်းတာ၊ ထိုးသွင်းတဲ့အရာ ကြီးတာ၊ ထိုးသွင်းမှု အရှိန်-အကြိမ်တွေ အပေါ် မူတည်တယ်။ စုတ်ပြဲချိန်မှာ နာမယ်။ ဒဏ်တူတာဖြစ်ပေမဲ့ အနာခံနိုင်စွမ်း မတူကြဘူး။ အတော်များများ အပျိုလေးတွေ ပဌမအကြိမ် ဆက်ဆံရင် မျက်ရည်ကျတဲ့အထိ နာတယ်။ သွေးထွက်မယ်။ တကယ်လို့ သေးတာ၊ နည်းတာနဲ့သာ ကြုံဘူးထားရာကနေ ပိုကြီးတာ၊ ပိုများတာနဲ့တွေ့ရင် နဲနဲသာနာမယ်၊ နဲနာသာ သွေးထွက်မယ်၊ သွေးမထွက် တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။)
မ-အင်္ဂါနှုတ်ခမ်းသား အကြီးနှစ်ခု အောက်ဖက်မှာ ဆုံတဲ့နေရာကို ခေါ်တယ်။ ဒီ အရေပြား-အနုစားလေးက စုပ်ပြဲမသွားသေးဘဲ မိမွေတိုင်း ရှိနေရတယ်။ (ဒီအချက်က Hymen အပျိုမှေးလို အရေးပါပေမဲ့ လူပြော သိပ်မများဘူး။ မွေးလမ်းကနေ ကလေး မမွေးဘူးသူတိုင်း တင်းတင်းရင်းရင်း ရှိနေတယ်။)
အပျိုစစ်ပါတယ်လို့ သက်သေပြဘို့ရာ “အသုံးပြုနိုင်တယ်” လို့ ပြောတာဟာ ဒါနဲ့ မကိုက်ရင်တော့ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဘယ်သူက အဆုံးအဖြတ်ကို ပေးမှာလဲ။
မြန်မာပြည် တရားခွင်မှာ ဆရာဝန်တွေက (သိရ သလောက်တော့) ထွက်ချက် မပေးရပါ။ ခင်ပွန်းလောင်းက ထည့်စဉ်းစားနိုင်ပေမဲ့ ကံသေကမ္မ ပြောမရလို့ ချွင်းချက် ထားသင့်တယ်။ ဒီလို အဆုံးအဖြတ်မျိုးဟာ မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ တကယ့် ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှု အစစ်ဖြစ်တယ်။
ကံဆိုးသူတွေမှာ ဒီဝိသေသဟာ (မေးတဲ့သူလို) တကယ့်ပြဿနာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုတာ အစဉ်အလာ လက်ခံထားတဲ့ အချက်ကတော့ Vaginal penetration with penis (ဗဂျိုင်းနား) ထဲကို ကျား-လိင်အဂ်ါ ထိုးသွင်းနည်းနဲ့ ဆက်ဆံတာကို အလိုတူဖြစ်ဖြစ်၊ အလိုမတူဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံးတကြိမ် ရှိဘူးတာကို ခေါ်တယ်။
“Vagina-virginity (ဗဂျိုင်းနား) က (ဗားဂျင်း) ဖြစ်တယ်” လို့ အတိအကျခေါ်တယ်။ မေးဘို့ လိုသေးတာက ပါးစပ် သုံးနည်း တခုထဲသာ ရှိဘူးတာလား၊ စအိုနည်းတခုတည်းဆိုလဲ ထည့်ရမှာဘဲ။
အပြိူစဈလားမစဈလား အပွငျပနျးကခှဲခွားနညျး သိခငျြတဲ့ဘျောဒါတမြေားလာလို့ တငျပေးလိုကျပါတယျ ဒါကအပွငျပနျးနဲ့ခှဲခွားရမဲ့နညျးလေးတှေ သိသမြှအကုနျပွောပ...
#မြှော့ပါသောမိနျးမတို့အကွောငျးတစတေ့စောငျး မြှော့က မှေးရာပါ အမြိုးသမီး အင်ျဂါ အားကောငျးတဲ့ သူတှမှော ပါပါတယျ။မြှော့ဆို တာအရမျးသနျမာ တဲ့ ကွှကျ...
မြှော့အကွောငျး နှငျ့ မြှော့မပါတဲ့သူတှအေတှကျမြှော့အားကောငျးအောငျလကေ့ငျြ့နညျး
‘ ‘ မြှော့ ‘ ‘ မြှော ‘့ဆိုသညျမှာ သတ်တဝါမြှော့ကို ပွောခွငျးမဟုတျ ။ အရပျသုံးစကား အထူးသဖွငျ့ ယောကျြားလေးမြားကွားရပေနျးစားသညျ ။ ဘယျလိုမိနျးမကတေ...